चारतारे होटल सिग्नेटका बारेमा दीपेन्द्र अग्रवालका दुई विकल्प - Nepalgunj Business
चारतारे होटल सिग्नेटका बारेमा दीपेन्द्र अग्रवालका दुई विकल्प
‘अह ! होइन । बेचेकै छैन ।’ –होटल विक्रीको हल्ला सत्य नभएको बताउँदै अग्रवालले जवाफ फर्काए । उनले फेरी थपे,–‘तर विक्री वा पार्टनरसिप के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको चाँही हो ।’ बेच्ने वा नयाँ व्यवस्थापन आउने भन्ने कुरा सामान्य विषय भएको अग्रवालको भनाई थियो ।
नेपालगञ्ज – दीपेन्द्र अग्रवालले तीन वर्ष अघि नेपालगञ्जको सुर्खेतरोडमा खोलेको चारतारे होटल सिग्नेट विक्री भएको चर्चा छ । औषधीको प्रमुख बितरक ( कमला मेडिसन) देखि एकैपटक चारतारे होटल सञ्चालन गरेका नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित व्यवसायी अग्रवालले खोलेको होटल एकाएक किन विक्री भयो भन्ने चासो हुनु स्वभाविक थियो । शहरमा चलेका अनेकन चर्चाको वास्तविकता के हो ? हामी अग्रवालकै मुखमा सुन्न चाहान्थ्यौ ।
यस विषयमा पहिलो पटक अग्रवालले मुख खोलेका छन् । तपाईले होटल बेचेको हो ? भेटघाटको क्रममा उनलाई पहिलो प्रश्न ग¥यौं । ‘अह ! होइन । बेचेकै छैन ।’ –होटल विक्रीको हल्ला सत्य नभएको बताउँदै अग्रवालले जवाफ फर्काए । उनले फेरी थपे,–‘तर विक्री वा पार्टनरसिप के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको चाँही हो ।’ बेच्ने वा नयाँ व्यवस्थापन आउने भन्ने कुरा हरेक उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य विषय भएको अग्रवालको कथन थियो ।
‘बेच्ने वा पार्टनसिप खोजेर अपग्रेड गर्दै होटललाई अझ राम्रो बनाउने भन्ने यि दुई विकल्पमा सोंचिरहेको छु । यतिका लगानी गरेर बनाएको होटल चटक्कै छाड्न कहाँ सकिन्छ र ? तर हेरौ के हुन्छ ?’– अग्रवालले भने । ‘भने जस्तो मूल्य’ पाए बेचिहाल्ने मनस्थिती बनाएका छन् अग्रवालले । उनी भन्छन्,–‘भने जस्तो मूल्य पायो भने जसले पनि विक्री गर्छ । म पनि गर्छु ।’ यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा होटल क्षेत्रमै काम गरेको पार्टनर खोजेर अगाडी बढ्न सकिने बताउँदै अग्रवालले भने,–‘म भन्दा अझ राम्रो मान्छे आएर होटल अपग्रेड गर्दै अगाडी बढोस् भन्ने चाहेको छु ।अहिले पनि होटल राम्रै चलेको छ । थप राम्रो बनाउन जरुरी छ ।’
अग्रवालले होटल घाटामा गएर बेच्न खोजेको त होइन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने,–‘त्यस्तो हुँदै होइन । मैले घाटा खाएर बेचेको होटल अरु कसैले किन्छ र ? मैले अहिले तयार गरेको पूर्वाधारमा नयाँ मान्छे आयो भने पनि होटल नै खोल्ने हो । त्यसरी होटल खोल्ने मान्छेले अहिले घाटामा छ की नाफामा छ भनेर त हेर्छन होला नी ?’
औषधीको क्षेत्रमा राम्रै जमेका अग्रवालले तीन वर्ष अघि नेपालगञ्जकै सबैभन्दा महङ्गो सुर्खेतरोडको जग्गामा होटल खोलेका थिए । जसमा रु ६५ करोड लागत लागेको अग्रवाल बताउँछन् । साविकै पूर्वाधारमा छ तले क्यासिनो निर्माणाधिन अवस्थामा छ । नेपालगञ्जमा एक पछि अर्को होटल खुल्दै थिए । राम्रो सम्भावना देखेर अग्रवालले आफुले गर्दै आएको व्यवसाय भन्दा फरक क्षेत्रमा यति ठुलो लगानी गरे । मानसरोवर र पश्चिमको केन्द्र भएका कारण नेपालगञ्जमा होटल क्षेत्रले राम्रै बिजनेश पाउने अपेक्षा सहित अग्रवालले सहित धेरैले लगानी गरे । तर पछिल्लो समय यहाँ मान्छेको फ्लो कम भएसंगै होटलले बिजनेश पाउन छाडेका छन् । यही सेरोफेरोमा होटल सिग्नेट सहित अन्य कयौं होटल पनि बिक्री हुने हल्ला बेलाबखत चल्ने गर्छन ।
सोंचेको जस्तो सतप्रतिशत नभए पनि धरासायी नै हुने अवस्था नभएको अग्रवालको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्,–‘सञ्चालन खर्च त जहाँको होटलले पनि उठाएकै छन् ।’ अग्रवालले घाटा भएर होटल बिक्री गर्न नलागेको बताए । उनले भने,–‘मेरो मात्र होइन हरेक होटलले सञ्चालन खर्च उठाएकै छन् । नाफा नभएको चाँही हुन सक्छ । घाटा खाएर होटल बेच्न लागेको होइन ।’ अग्रवालले भने जस्तो मूल्य पाए जोसुकैले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न तयार हुने बताउँदे भने,–‘यसको अर्थ घाटा लागेको भन्ने त होइन नी ?’
‘बजारक्षेत्रमा यतिका ठुलो र सुविधा सम्पन्न होटल खोल्ने नयाँ आयाम थपेको छु । त्यस बाहेक अरु खास छैन । होटल क्षेत्रमा निरासा छैन । राम्रो सम्भावना देख्छु ।’
अग्रवालले होटल बेच्ने पहिलो बिकल्प कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पार्टनरसिप खोजेर होटललाई अपग्रेड गर्दै अझ राम्रोसंग सञ्चालन गर्ने मनिस्थिती पनि बनाएका छन् । उनी भन्छन्,–‘बिक्री नै गरिहाल्ने भन्ने पनि होइन । यही क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे आएर पार्टनरसिपमा अझ राम्रोसंग चलाउँ भनेर आउँछ भने त्यसमा पनि तयार छु ।’ अन्य व्यवसाय गरिरहेको मान्छे होटल क्षेत्रमा लगानी गर्दा के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भने,–‘बजारक्षेत्रमा यतिका ठुलो र सुविधा सम्पन्न होटल खोल्ने नयाँ आयाम थपेको छु । त्यस बाहेक अरु खास छैन । होटल क्षेत्रमा निरासा छैन । राम्रो सम्भावना देख्छु ।’
औषधी उद्योग खोल्ने
अग्रवालले औषधी उद्योग खोल्ने तयारी गरेका छन् । औषधी उद्योग सञ्चालनसंग होटल बेच्ने विषयको कुनै सरोकार नहुने उनले बताए । ‘मेरो अनुभव भएको क्षेत्र हो । होटल विक्री भए पनि नभए पनि उद्योग खोल्छौ ।’– अग्रवालले भने । तर औषधी उद्योग सञ्चालनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २३, २०७६ 3:06:11 PM